Ndeapi marudzi ema spark plugs anopa kuramba kwakanaka kune kabhoni kuvaka-up?
Chii chinonzi Iridium spark plug?
Iridium ine yakanyanya kunyunguduka pa 2545 centigrade yakakwirira kupfuura iyo yeplatinum pa 1772. Izvi zvinobvumira kuti electrode ive yakaonda kupfuura yeplatinum, ichivandudza kupisa. Uye zvakare, iyo thermo mupendero wakagadzirwa muIridium spark plug inoita kuti isanyanya kupikisa kabhoni fouling.
Chii chinonzi V-yakakwenenzverwa mhando spark plug?
A Iine 90 ° V-groove mumuromo wepakati electrode kuwedzera kudzima.
Chii chinonzi resistor spark plug?
Ndeipi basa rembabvu pane insulator?
A Ivo vanoona kuputira uye kudzivirira flash-ove
Nei kupisa kwekupedzisira kwekuonekwa kwepark plug kuchikosha?
A Nekuti iko kwekupedzisira kupfura kutaridzika kunoratidza kukodzera kwepark plug pamwe nemamiriro enjini.
Zvinorevei TAKUMI chikamu nhamba?
A Iyo TAKUMI chikamu nhamba ndiyo hwaro hwekusarudza spark plug inotsanangurwa nemugadziri.